China ZZ Disposable Sugarcane Bagasse Plates - Dịka okike Organic, Eco-friendly Biodegradable & Compostable - Akwụkwọ & Ngwakọta rọba - Ọrụ dị egwu - 10 ″ Ndị na-emepụta Plate na ndị na-eweta ya | ZHONGSHENG
Diski ewepu akpa mmanya ZZ diski - Eke okike, Eco-friendly Biodegradable & Compostable - Akwukwo & Akwukwo ozo - Akwukwo Ewu - 10 ″ Plate
Ihe adighi: YP010
Size: 258 * 20.5mm
Ogo katoonu: 53 * 18 * 53cm
Mkpoko Sugarcane Bagasse ndị a nwere ike ịdọrọ bụ ezigbo nhọrọ maka onye ọ bụla nke na-ezube ịtụ oriri. Jiri ha maka emume ncheta ọmụmụ gị na-esote, fete ma ọ bụ ọtụtụ ememme ndị ọzọ pụrụ iche. Ihe mmebi nke gburugburu ebe obibi na enwere ike gbanyụọ ya, efere 10 are a nwere biodegradable n'ime ọnwa atọ ruo ọnwa isii. Ha na - eguzogide okpomọkụ ruo 212 degrees Fahrenheit. Ihe ngwugwu a nwere efere 500. Zụta otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwugwu, dabere na nha nke otu gị. Diskable Sugarcane Bagasse efere, ndammana Organic, Eco-friendly, Biodegradable na Compostable Paịlet na Ihe ọzọ, Ọrụ dị arọ, 10 ″
10 10 efere dị arọ
Nke gara aga: Na -eme akụkụ nri na desserts na a ZZ biodegradable okpete / bagasse 6. Efere.
Osote: Ngwa ahia ZZ Eco Biodegradable White Sugarcane / Bagasse Rectangle Plate- 10 ″ x 5 ″ x 4/5 ″ -500 igbe
Ijere nri akuku na ihe ichotara onu ihe omuma ndi a na ZZ ...